Izokwethulwa incwadi efundisa ngokushintsha kwesimo sezulu | News24
Izokwethulwa incwadi efundisa ngokushintsha kwesimo sezulu
ISITHOMBE: LETHIWE MAKHANYAUMnu Scelo Jili.
UMBHALI osanda kukhipha incwadi uthi unethemba lokuthi incwadi izoletha ushintsho ezimpilweni zabantu.
UMnu Scelo Jili wasendaweni yaseMafakatini usanda kukhipha incwadi eyinoveli esihloko sithi uMhlaba Ofile ngenyanga kaNhlolanja (February) kanti izokwethulwa ngokusemthethweni mhla ziyi-9 kuNhlaba (May) emtapweniwolwazi iBessie Head.
Ekhuluma ne-Echo uthe le ncwadi yehluke kakhulu ngoba iveza kakhulu izinsizwa zase-Afrika ezigogode eMelika kakhulu ngolwazi lwasemkhathini (Astronomy) zafunda nangeminye imihlaba (Planets).
UJili uthe kumthathe izinyanga eziyisithupha ukuthi aphothule ukubhala lencwadi kwazise ibidinga ukuthi enze ucwaningo.
“Le ncwadi eyokubheka ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu (climate change) kudlalwa yin? Nokuthi eminyakeni ezayo kuzoba nomthelela onjani emhlabeni esikuwo kanjalo nokuthi ososayensi banaluphi uhlelo ukusiphephisa kulesimo,”kusho yena.
Uthe into emenze ukuthi abhale lencwadi ukuvula abantu amehlo ngesimo semvelo nokuguquka kwesimo sezulu.
“ Ngifuna ukuthi abantu bakithi bebala elimnyama babe nolwazi ngokuthinta eminye imihlaba ngoba lemikhakha ivame ukuthandwa kakhulu abamhlophe.Nokuthi njengoba singena esigabeni se-fourth industrial revolution abantu bazijwayele izinto ezithinta ubuchwepheshe nesayensi singasaleli emuva,” kusho yena.
Uqhube wathi ujabule kakhulu ukuthi agcine esekwazile ukuthi akhiphe le ncwadi kwazise bekuyisifiso sakhe ukuthi abhale incwadi ngelinye ilanga.
“Uthando lwami lokuthanda ukubhala luqale ngisasesikoleni ngibhala izindatshana ezimfishane emncintiswaneni weLanga Newspaper. Indatshana yami yadla umhlanganiso lapho ngoSeptember 1992 ngiseyingane.Ngaphinda ngabhala izincwadi eziya kumhleli emabhukwini afana noDrum,True love, Pace Magazine ne Echo.
Ngangimangaliswa ukuthi izincwadi zami zaziqokwa njalo ukuthi izincwadi ezivelele (letter of the week).
“Ngazinikela lapho-ke ukuthi ngibhale imidlalo yomoya ngingabe ngisama. Bengibuye ngibhale izindaba zomphakathi ephephandabeni i-Echo eminyakeni edlule uma ngabe ngithola isikhathi.”
Ngaphandle lokubhala izindatshana, uJili useke waba umbhali wemidlalo yomoya emisakazweni ehlukene okubalwa uKhozi FM,Ligwalagwala FM,Ikwekwezi FM ne-Khwezi FM.